कोरोनाले बिगार्छ अ’ण्डकोष, प्रजनन क्षमतामा पनि ह्रास आउने ! « Etajakhabar
कोरोनाले बिगार्छ अ’ण्डकोष, प्रजनन क्षमतामा पनि ह्रास आउने !
प्रकाशित मिति : ३० फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १२:११
एजेन्सी । चीनवाट सुरु भएको कोरोना भाइसको सं क्र मण ले अहिले विश्व आक्रान्त छ। चीनमा भने कोरोना नि यन्त्र ण मा आएको भन्दै खुसीयाली मनाइएको छ । चीनमा नि यन्त्र ण मा आएको भएप्नि अन्य मुलुकमा थप भ याव ह रुपमा कोरोनाको सं क्र मण फैलिएका कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनले सं कटा लको घोषणा गरेको छ।
नेपालगन्जको सिमाना नजिक भारतीय वजार लखनउमा पनि कोरोना भएको पुष्टि भएको छ । सिमानामा नै कोरोनाको सं क्रम ण फैलिएपछि नेपालमा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । नेपालले कोरोना रोक्न विभिन्न पहल गरिरहेको छ। यस अघि नेपालमा देखिएको कोरोना भाइसको स क्र मण का कारण एक जना निकोभएर घर फर्किसकेका छन्।
नेपालगन्जकै एक युवामा कोरोना भएको पुष्टि भएको थियो । तर यो रोग लागेर निको भएका व्यक्तिहरुको प्रजजन क्षमता कमजोर हुने यौ न शक्तिमा कमी आउने र पुरुषको अ ण्डकोष विगार्ने चीनका चिकित्सकहरुले बताएका छन् । चिकित्सकहरुले चीनमा कोरोना निको भएर फेर्कका पुरुषहरुलाई आफ्नो प्रजनन अंग परिक्षण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
तर यसको कुनै अध्ययनले भने प्रमाणित गरेको छैन्। चिनियाँ डाक्टकाअनुसार यसले अ ण्ड कोषलाई विगार्ने र निको हुने वित्तिकै तत्काल आफ्ना अ ण्डोषको परीक्षण गर्न पनि सुझाब दिएका छन्। कोरोनाको उद्गम स्थल वुहानमा एक व्यक्तिको अ ण्ड कोषको परीक्षण गर्दा यस्तो स म स्या देखिए पछि चिकित्सकहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । वुहानको एक अस्पतालका प्रोफेसर डाक्टर लि युफुङले जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
त्यस्तै वुहानका डाक्टरले कोरोनाको सं क्र मण भएर उपचार पछि घर फर्किएकाहरुले तत्काल आफ्नो यौ न परीक्षण तत्काल गराउन पनि सुझाब दिएका छन्। विश्वभर फैलिएको कोरोना सं क्र मण १२७ देशमा पुगेको भने करिब ६ हजार मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्।